Oromia (Wanbara): Systematic discriminations, cultural Genocide against Oromo people in Wenbara Zone. Naannoo Benishangul godina Matakkal keessa Oromoo 200,000 ta’utu mirga afaan ofiitiin barachuufi hojjachuu akkasumas of bulchuu dhoowwamee jiraata jira. | OromianEconomist
Oromia (Wanbara): Systematic discriminations, cultural Genocide against Oromo people in Wenbara Zone. Naannoo Benishangul godina Matakkal keessa Oromoo 200,000 ta’utu mirga afaan ofiitiin barachuufi hojjachuu akkasumas of bulchuu dhoowwamee jiraata jira.	August 31, 2017
[…] Oromia (Wanbara): Systematic discriminations, cultural Genocide against Oromo people in Wenbara Zone… […]